विदेशबाट के कति सामान ल्याउन पाइन्छ ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home प्रवास विदेशबाट के कति सामान ल्याउन पाइन्छ ?
२०७५, १६ फाल्गुन बिहीबार ११:३२
पारिवारका सदस्य एकै ठाउँमा भेला भएर मीठो–मसिनु खाँदै रमाइलो गर्नु विशेषता हो । फर्किदा परिवारका सदस्य वा आफन्तलाई ‘कोसेली’ ल्याइदिनु स्वभाविकै हो । तर, ख्याल नगरी ल्याउने हो भने तपाईँले ल्याएका सामान जफत पनि हुन सक्छ । तपाईले विदेशबाट ल्याउने कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क लाग्दैन भने कतिपयमा सीमितता तोकिएको छ । विशेषगरी मोबाइल, टिभी तथा अन्य विद्युतीय सामान, गरगहना र मदिरा ल्याउँदा विचार पुया¥उनुपर्छ ।
यस्ता सामानमा सीमितता तोकिएकाले बढी भएमा जफत पनि हुन सक्छ ।विदेशबाट आउनेले भन्सार तिर्न पर्ने/नपर्ने बस्तुको सम्वन्धमा भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी गुण्टा, झिटी भारी सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसले ल्याउने सामानमा सीमितता तोकेको छ ।
Previous articleमगर समन्वय समितिको अध्यक्षमा डकमायाँ
Next articleऔलामा खानेपानी आयोजना निर्माण,५८ घरधुरी लाभान्वित